टोकियो मा सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय | यात्रा समाचार
टोकियो मा सबै भन्दा राम्रो संग्रहालयहरु
किन यो हामी यात्रा जब हामी भ्रमण संग्रहालयहरू र हामी घरमा हुँदा यो गर्दैनौं? सबै होईन, यो सत्य हो, तर धेरै व्यक्तिहरू आफूले यात्रा गरेको संग्रहालयहरूमा गएर उनीहरूलाई समर्पण गर्छन् र उनीहरू आफ्नै शहर वा देशका लागि चिन्दैनन्। यात्रा सत्य।
म आफैं संग्रहालय बग होइन र ठूला शहरहरू भित्र पसेको छैन तर तिनीहरूमा नझलिकनै "किनकि तपाईंलाई यो थाहा छ।" यदि तपाईंसँग मेरो रुचि केहि छैन भने, यो भुल्नुहोस् कि म भित्र समय बर्बाद गर्दैछु। केहि अपवादको साथ, मँ मेरो रुचि केहि मा आफ्नो समय खर्च गर्न रुचाउँछु। तर अर्को वर्ष टोकियोको चौथो यात्रामा म संग्रहालयहरू छन्, अब म तिनीहरूलाई रोक्न सक्दिन, त्यसैले मैले ब्याट्री राखें, मैले अनुसन्धान गरे र यहाँ छन् मेरा टोकियो मा सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय:
1 समुराई संग्रहालय
2 सीवर संग्रहालय
3 Okanomizu ओरिगामी कैकान
4 Meiji विश्वविद्यालय आपराधिक सामग्री विभाग संग्रहालय
5 बेसबल हॉल अफ फेम र संग्रहालय
को आंकडा samurai यो जापानी क्लासिक हो र यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने सिनेमाले यसलाई कसरी देखाउँदछ, त्यस पछि यो संग्रहालय लायक छ। यो मेरो केस हो जुन म क्लासिक जापानी अवधिबाट म्यून म reading्गुन पढाउँदै छु। समुराई सात शताब्दीसम्म त्यहाँ रहे, शोगुनेटको अन्त्य नहुन्जेलसम्म इडो कालखण्डमा अमेरिकी र युरोपियनहरू व्यापारमा आएका थिए।
त्यहाँ धेरै थिए जापानी इतिहास मा प्रसिद्ध समुराई योद्धाहरु, तरवारको साँचो स्वामी, त्यसैले यहाँ तपाइँ सम्पूर्ण कथा थाहा पाउनुहुनेछ। संग्रहालयमा प्रदर्शनी हल सहित दुई फ्लोर छन्। भुईं फ्लोरमा स्मारिकाको पसल छ र माथिल्लो तलामा एक छ आर्मर्ड हलहो, अर्को संग तरवार, एक हेलमेटको साथ र एक कामकुरा अवधिमा समर्पित। संग्रहालय को बारे मा महान कुरा यो हो तपाईं समुराईको रूपमा "लुगा लगाउन" सक्नुहुन्छ र केहि तस्वीर लिन सक्नुहुन्छ।
त्यो हो, तपाईं आफ्नो टाउको मा राख्न सक्नुहुन्छaकाबुटो (एक हेलमेट वा जापानी हेलमेट) र समुराई लुगा र कटाना पनि बोक्छ। केहि दिनहरू पनि छन् तरवार द्वंद्व प्रदर्शन। यी दुई गतिविधिहरूको लागि कुनै अतिरिक्त शुल्क छैन, टिकट मूल्य संगै समावेश छन्.
त्यहाँ क्यालिग्राफी पाठहरू हप्तामा दुई पटक पनि छन्, यद्यपि तपाईंले बुक गर्नुपर्दछ, र जापानी तरवार पाठ्यक्रम जसमा fee००० येनको अलग शुल्क छ (लगभग $ $०)।
आरक्षण रद्द गर्न सकिन्छ तर यदि तपाईं यसलाई एक दिन वा कम अग्रिमको साथ रद्द गर्नुभयो भने, तपाईंलाई दरको and० र १००% बीचमा चार्ज गरिनेछ। संग्रहालय Shinjuku मा छ जेआर स्टेशनको पूर्वी निकासबाट केवल minutes मिनेट वा सबवे स्टेशनबाट १० मिनेट। यो बिहान १०::8० देखि दिउँसो 10 बजे सम्म खुल्छ र एक सुपर व्यापक अंग्रेजी वेबसाइट छ।
जापानमा पहिलो चोटि पैदल यात्रा गर्दा मेरो ध्यान आकर्षण गर्ने एउटा चीज यो ढल कति सुन्दर थियो। तिनीहरू सबै एक थियो रेखाचित्र, एक डिजाइन, र colorsहरू। तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुन्न तर ती विवरणहरूमा आश्चर्य छ कि विश्वको अन्य शहरहरूमा यति बेवास्ता गरियो।
त्यहाँ सबै प्रकार, आकार र रंगहरू छन्। प्रत्येक शहरको आ-आफ्नै हुन्छ ताकि तपाईं सजिलैसँग ती सबैको फोटो खिच्न सक्नुहुनेछ र उत्कृष्ट एल्बम सँगै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै पर्यटकहरू छन् जो ढलमा चित्रण गर्छन् र त्यो केवल जापानमा हुन सक्छ।
यो संग्रहालय, Fureai Gesuidokan, टोकियोको पश्चिममा अवस्थित छ, र स्थापना गरिएको थियो जब सीभर प्रणालीको प्रवेशका लागि १००% कभरेजमा पुग्न लक्ष्य पुगेको थियो। यो १ 100 1990 ० मा थियो। विशाल प्रणाली २ 25 मिटर गहिरो लुकाइएको छ र संग्रहालयले यो कसरी निर्माण गरिएको थियो, यसको रेखाचित्र के हो, यसले कसरी घरहरूसँग जडान गर्छ र अन्य कुरा प्रकट गर्दछ। प्रवेश निःशुल्क छ।
तर यो आफ्नो प्रकारको एक मात्र संग्रहालय होइन। Odaiba मा अर्को छ त्यसोभए यदि तपाईं टोकियो खाडीमा यस मानव निर्मित टापुमा जानुहुन्छ (तपाईंलाई जीवनको आकार गुन्डमको पछिल्लो फोटोमा रुचि हुन सक्छ), तपाईं यसलाई भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा इन्द्रेणी ढल संग्रहालय। तपाईं कसरी प्रणाली काम गर्दछ देख्न सक्नुहुनेछ, पम्पहरू, नाल्याहरू, केन्द्रीय नियन्त्रण कोठा, पानी विश्लेषण प्रयोगशाला।
तपाइँ यो धेरै यूरिकॅमोन Odaiba-kaihinkoen स्टेशन को निकट फेला पार्नुभयो। टोक्यो स्काइट्रीको खाडी र माउन्ट फुजी पनि बोनसको रूपमा।
Okanomizu ओरिगामी कैकान
तपाई उसलाई मन पराउनुहुन्छ ओरिगामी, कलात्मक कागज फोल्डिंग को कला? त्यसैले यहाँ एक मूल यात्रा छ। यो एक प्रदर्शनी केन्द्र हो जुन एक पसल र कार्यशालाको साथ ओर्गामीमा समर्पित छ। तपाईं जापानी कागजको साथ यो कलाको कार्य पेशेवरहरू हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ, washi, र आफ्नै सिर्जना पनि गर्नुहोस्, तल हेर्नुहोस् र उनीहरूबाट सावधान सल्लाह दिनुहोस्।
यो पनि राम्रो ठाउँ हो यस कलाको इतिहास, यसको मूल, शिष्टाचार सिक्नुहोस् के खतरामा छ, परम्परागत र आधुनिक प्रविधि। सत्य, एक सुन्दर ठाउँ, यति परम्परागत जापानी कि तपाईं सुपर आराम महसुस गर्नुहुनेछ।
यो १-1-१-7 Yushi ma, Bunkyo ku मा अवस्थित छ। तपाईं त्यहाँ Chuo वा Sobu रेखा द्वारा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, Ochanomizu स्टेशन मा बन्द हुँदै। डाउनटाउन दुबै स्टेशनबाट मात्र सात मिनेट पैदल दूरीमा छ। यो मारुनचीची लाइन सबवे स्टेशनबाट १ 14 मिनेट जति भए पनि नजिक छ। यो बिहान :15: to० देखि साँझ9सम्म खुल्छ र जाडो र गर्मीको बिदामा र नयाँ वर्षहरूमा बन्द हुन्छ। त्यहाँ प्रवेश शुल्क छैन।
Meiji विश्वविद्यालय आपराधिक सामग्री विभाग संग्रहालय
लामो नाम, तर यो ओरिगामी स्टोर-ग्यालेरीको रूपमा उही क्षेत्रमा भएको कारण मैले यसलाई सूचीमा थपेको छु। एउटा ढु with्गाको साथ दुई चराहरू। यस प्रकारको संग्रहालय सँधै रमाईलो हुन्छ त्यसैले यसले तपाईंलाई एक गर्न आमन्त्रित गर्दछ अपराध को इतिहास को माध्यम बाट र सजाय को प्रकारहरु ती दिनहरूमा मानव अधिकारहरू अवस्थित थिएनन्। जापान र विश्वमा यति धेरै रमाइलो चीज मध्ये एक फ्रान्सेली गिलोटिन वा न्युरेम्बरबर्गको आइरन लेडी हो।
यो संग्रहालय दुई अन्यसँग मिलेर काम गर्दछ, जुन पुरातत्व विभागको र उही विश्वविद्यालयको कच्चा माल विभागको। तिनीहरू १-१ कान्डा-सुरुगादै, चियोडा-कुमा अवस्थित छन्। टोकियो तपाईं ओचनोमिजु स्टेशनमा जानुहुन्छ, यो बिहान १० देखि साँझ 1 सम्म खुल्दछ र प्रवेश नि: शुल्क र खुला छ।
बेसबल हॉल अफ फेम र संग्रहालय
मेरो अन्तिम यात्रा मा, एक को राष्ट्रिय च्याम्पियनशिप बेसबल र मान्छे कट्टर थिए। यति धेरै कि म एक हिरोशिमा कार्प प्रशंसकमा अन्त भएँ त्यसैले म तिनीहरूलाई लाइभ हेर्न को सपना देख्छु।
सबै थाहा छ जापानी बेसबल इतिहास तपाईं यहाँ आउनु पर्छ, टोकियो डोम। यो संग्रहालय देशकै पहिलो प्रकारको थियो र १ 1959 80 in मा खोलियो। यो कोराकुएन स्टेडियमको छेउमा छ जुन जापानी बेसबलको मक्का हो जुन १ XNUMX s० को दशकमा समाप्त भयो। टोकियो डोम। आज संग्रहालय पहिलेभन्दा दुई गुणा ठूलो छ।
मार्च र सेप्टेम्बर बिच यो बिहान १० देखि साँझ from सम्म र अक्टुबर र फेब्रुअरी बीच बिहान १० देखि साँझ 10 सम्म खुल्छ। प्रवेश y०० येन हो। तपाईं मा खरीद गर्न रोक्न सक्नुहुन्न स्मारिका स्टोर। तिमी त्यहाँ कसरी पुग्छौ? खैर, मेट्रो द्वारा। तपाईं JR Chuo Lines, Toei Mita वा Toei Eh-eo, Marunouchi वा Nanboku प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं टोकियो डोमको प्रवेशद्वार २१ नजिक संग्रहालय पत्ता लगाउनुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » टोकियो » टोकियो मा सबै भन्दा राम्रो संग्रहालयहरु